ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၄-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၄-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- မြစ်ဆုံရေကာတာ အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ရန် တရုတ်အစိုးရ CPI ကြိုးစား click
- ကြေးနီစီမံကိန်းနယ်မြေကို တရုတ်သံအမတ် သွားရောက် click
- မြန်မာဒုက္ခသည် ၇ သိန်းကျော် ရှိနေကြောင်း ဦးအောင်မင်း တရားဝင် ပြောပြီ click
- တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်နှင့် အစိုးရ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ရက်ရွှေ့ဆိုင်း click
- တန်းတူအခွင့်အရေးအတွက် ပြည်နယ်တိုင်း ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်၊ ကိုယ်ပိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရှိဖို့လို RCSS ခေါင်းဆောင် ပြော click
- Technical Team ဖွဲ့စည်းရန် KIO အဆင်သင့်ဖြစ် click
- ကျည်ဆံခွံ လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် ဆင်းတုတော် လိုင်ဇာမြို့သို့ ပင့်ဆောင်လာ click
- စစ်ရေးရာဇသံကို NGO ဆန်အကူအညီဖြင့် ချွေးသိပ် click
- လက်ထိတ်တန်းလန်း ရေနစ်သေဆုံးသူ အမှုတွင် တာဝန်ရှိသူ ရဲ ၅ ဦးကို အမိန့်ချတော့မည် click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာများ ပြန်ရန် နှစ်ဆတိုးမြှင့် ခွင့်ပြု click
- သံရုံးသွားသည့် လမ်းခရီး မလုံခြုံသဖြင့် မလေးရှားရောက် မြန်မာအချို့ ပုန်းနေကြဆဲ click
- ဆွဲတင်စစ်ရုံးချိန်း တရားလိုသက်သေ စစ်ဆေး click
- မက်စ်မြန်မာ သိမ်းထားသည့် လယ်ဧက ၅၀ ကျော် ၁၀ ရက်အတွင်း ပြန်ပေးမည် click
- ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကျွန်းစိုက်ခင်းကြောင့် မြေဧက ၁ဝဝ ခန့် သိမ်းဆည်းခံရဟု ဆို click
- ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေတာကြောင့် လယ်မြေတွေ ပြန်ချမပေးနိုင် ဖြစ်နေ click
- စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ လယ်ယာမြေ ဧက ၅၀ အခမဲ့ ဖော်ထုတ် click
- လယ်ယာကဏ္ဍ တိုးတက်ရေး အကျိုးတူဆောင်ရွက်ရန် လို click
- တောင်သူ ထုတ်ကုန်များ ဈေးကွက်နှင့် သင့်တင့်ဈေးနှုန်း ရရှိရေး ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမည် click
- MDRI နှင့် မီချီဂန်တက္ကသိုလ်၏ စိုက်ပျိုးရေးမဟာဗျူဟာ အကြံပြုချက် အစိုးရသို့ တင်ပြတိုက်တွန်းမည် click
- သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဆွေးနွေးနိုင်ရန် နိုင်ငံတကာမီဒီယာ ညီလာခံ ကျင်းပမည် click
- ချင်းသူရဲကောင်း ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး၏ အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနား ကျင်းပမည် click
- ကယားလူမျိုးစုံ ဒီမိုကရေစီပါတီ (KUDP) သစ် မှတ်ပုံတင်ရန် ပြင်ဆင် click
- NLD ခရိုင်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်၏ အိမ် ဖောက်ထွင်းခံရ click
- ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အစည်းအဝေး ဒီမိုကရေစီနှင့် ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် မူဝါဒ မထုတ်ပြန်နိုင် click
- ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အစည်းအဝေး ပီအာရ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းဟု ဆို click
- ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အင်အား ၃ သန်းရှိဟု ဆို click
- ပဋိပက္ခဖန်တီးမှုများ ကာကွယ်တားဆီးရေး ငြိမ်းချမ်းရေးဓမ္မသဘင်တရပ် မန္တလေးတွင် ကျင်းပမည် click
- ဦးဝီရသူ၊ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်၍ TIME မဂ္ဂဇင်းအား သမ္မတရုံး ကန့်ကွက် click
- တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကို သမ္မတရုံး ဘာကြောင့် ကန့်ကွက်ရလဲ (အင်တာဗျူး) click
- တိုင်း(မ်)မဂ္ဂဇင်း ဖော်ပြချက် အစိုးရ ကန့်ကွက် - ဦးရဲထွဋ်နှင့် မေးမြန်းချက် click
- တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း မီးလောင်ရာ လေပင့်တာလား (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ခွဲခြားဆက်ဆံမှု အဆုံးသတ်သင့်ပြီ (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- တိုက်ပုံဝတ်ကြရပါမယ် (ဆောင်းပါး) click
- အစိုးရဆိုတာ လူထုအကျိူးသယ်ပိုးဖို့ လူထုက ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ် (ဆောင်းပါး) click
- ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ လုပ်ရပ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (ဆောင်းပါး) click
- ချင်းပြည်သူတွေအတွက် အဲန်ဂျီအို ထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့ တနေ့မှာ ... (ဆောင်းပါး) click
- မူးယစ်ဆေး ယဉ်ကျေးမှု (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- မရဘူး ရတယ် (ဆောင်းပါး) click
- မျှော်လင့်ခြင်းများ ပြန်လည်ဆုပ်ကိုင်ခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ကို AKO ကျင်းပ click
- ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်တွင် မြန်မာအလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြ click
- ဆန္ဒပြ အလုပ်သမားများ တောင်းဆိုချက် ထိုင်းအလုပ်ရှင် လိုက်လျော click
- နိုင်ငံသားပိုင် လေကြောင်းလိုင်းသစ် နှစ်ခု ပြေးဆွဲတော့မည် click
- စက်စဲကမ်းခြေကို ဟိုတယ်ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် ဆောင်ရွက် click
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုန်စည်ဒိုင် ဖွင့်လှစ်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားတဦး ပြင်ဆင်နေ click
- မီးအာမခံ ထားရှိမှု နှစ်နှစ်အတွင်း ပိုများလာ click
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အနှောင့်အယှက် မန္တလေးတောင်တော် ဂေါပကအဖွဲ့သစ် ကြုံနေရ click
- သမ္မတ ပေးတဲ့ သမပိုင်ချေးငွေနဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရပ်ကွက်ဥက္ကဌ မောင်ပိုင်စီးလို့ စွပ်စွဲ (ရုပ်သံ) click
- မင်းသမီးကြီး ဝါဝါဝင်းရွှေ ဆုထူးပန်တာဝါကို Fatherland နဲ့ မဆောက်တော့ (ရုပ်သံ) click
- သုဝဏ္ဏဘူမိမြို့ဟောင်း ပြန်လည် တူးဖော်တော့မည် click
- ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၉၀ ကျော် သက်တမ်း ၂ နှစ်အထိသာ ခွင့်ပြု click
- မဲဆောက်ရှိ အခမဲ့ ကျောင်းများတွင် ယခုနှစ် ကျောင်းအပ်သူဦးရေ လျော့နည်း click
- အထက်တန်းအောင် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာကျောင်းသားများ ထိုင်းတက္ကသိုလ်သို့ တိုက်ရိုက် တက်ရောက်ရန် ညှိနှိုင်း click
- အိုင်စီတီပညာခေတ်သို့ အရွေ့ (ဆောင်းပါး) click
- နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ စာပေမှာ အက္ခရာ အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ click
- ဇေတ၀န်နှင့် ရောဟိနီ (ကဗျာ) click
- ပန်းတနော်တွင် ထားဝယ် မင်းသမီးကုမ္ပဏီမှ စာကြည့်တိုက်နှင့် ဆေးပေးခန်း လှူဒါန်း click
- မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့မှာ မြန်မာဝတ်စုံ ဖက်ရှင်ရှိုး ကျင်းပမယ် click
- ဆရာယုဒဿန် ဇာတ်ရုပ်တွင် စည်ဖြိုး သရုပ်ဆောင်မည် click
- ဧရာဝတီမြစ်ရေ မညစ်နွမ်းအောင် တားဆီးပေးပါ (ပေးစာ) click
ကျေင်းတွေဖွင့်တာ တစ်လပြည့်တော့မယ် ဆရာ ဆရာမ
အပြောင်းအရွှေ့ က ဘာတွေ လိုနေလို့ လဲ?
အာရကေ တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။?
အပြောင်းအရွှေ.ကိစ္စ အာရကေ တွေ ဘာတွေ မလိုပါဘူး ။
ထိုက်သင်.သလောက် ကန်တော.ရင်ရပါတယ် ။
၂၀ တန် ၂၀ ။
၃၀ တန် ၃၀ ပေါ. ။
စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဥပဒေ ဘက်
တော်သားတွေက ဥပဒေမဲ့ ကို ရဲတင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်တာ ဘယ်သူအား
၁။ တိုင်းအတွင်း ဒီလောက် သစ္စာ မဲ့ စွာ ဆောင်ရွက်နေတာ တိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရ ထိုက်သင့်တဲ့ တာဝန်မရှိဘူးလား?
၂။ ဘယ်လို စစ်ဆေး အရေးယူမလဲ?
၃။ ပါဝင်ပါတ်သက်မှူ ဖေါ်ထုတ်ပါ။
၄။ အခအန သတင်းထုတ်ပြန်ပေးပါ။